अनुसन्धान: यो 'Fibrotine' को कारण हुन सक्छ - Vondt.net
अनुसन्धान: यो 'Fibro कुहिरो' को कारण हुन सक्छ।
22 / 07 / 2018 /0 टिप्पणीहरू/i दीर्घकालीन पीडा, गुणस्तर लेख/av भोंड्ट
यहाँ तपाइँ के बारे मा अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ कि शोधकर्ताहरु लाई विश्वास छ "Fibro कोहरे" को कारण fibromyalgia र पुरानो दुखाइ निदान संग ती बीच।
Fibromyalgia पुरानो दुखाई निदान हो जुन मांसपेशिहरुमा र हड्डीमा महत्वपूर्ण पीडा दिन्छ - साथै गरीब निद्रा र संज्ञानात्मक प्रकार्य (जस्तै स्मृति)। दुर्भाग्यवस, यसको कुनै उपचार छैन, तर अब भर्खरको अध्ययनले जटिल पेन पजलमा पजलको अर्को अंश भेट्टायो। हुनसक्छ यो नयाँ जानकारीले उपचारको एक प्रकारको विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ? हामी दुबै आशा छनौट गर्छौं र विश्वास गर्दछौं।
हालसालैको एक शोध अध्ययनले हालसालै उनीहरूको रोमान्टिक अनुसन्धान निष्कर्षका कारण धेरै ध्यान प्राप्त गरेको छ। राम्रो संग fibromyalgia र पुरानो दुखाइ निदान बाट प्रभावितहरु को लागी परिचित छ, त्यहाँ दिनहरु हुन सक्छ जब यो लाग्छ कि टाउको 'झुण्डिएको छैन' - यो प्राय "तंतुमय कोहरे" (वा मस्तिष्क कोहरे) भनिन्छ र बिग्रेको ध्यान र वर्णन गर्दछ संज्ञानात्मक प्रकार्य। जे होस्, जब सम्म यो अध्ययन, त्यहाँ थोरै जानकारी भएको छ किन पुरानो दुखाइ विकार संग ती विनाशकारी लक्षण बाट प्रभावित हुन्छन्। अर्थात् "तंत्रिका शोर" को रूप मा: अब शोधकर्ताहरु लाई विश्वास छ कि उनीहरु पहेली को भाग पाएका हुन सक्छन्।
धेरै व्यक्तिहरू पुरानो पीडाले ग्रस्त छन् जसले दैनिक जीवनलाई नष्ट गर्दछ - यसैले हामी तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्दछौं सामाजिक मिडियामा यो लेख साझा गर्नुहोस्, हाम्रो फेसबुक पेज मन नहिचकिचाउनुहोस् र भन्नुहोस्: "हो फाइब्रोमाइल्जिया सम्बन्धी थप अनुसन्धान गर्न"। यस तरिकाले, कसैले यो निदानसँग सम्बन्धित लक्षणहरूलाई थप देख्न सक्ने बनाउन र अधिक व्यक्तिहरूलाई गम्भीरतासाथ लिएको निश्चित गर्न सकिन्छ - र यसरी उनीहरूलाई आवश्यक मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्। हामी यो पनि आशा गर्दछौं कि यस्तो बढाइएको ध्यानले नयाँ आकलन र उपचार विधिहरूमा अनुसन्धानका लागि बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छ।
यस अध्ययनमा, अनुसन्धान पत्रिकामा प्रकाशित प्रकृति - वैज्ञानिक रिपोर्टहरू, शोधकर्ताहरु लाई विश्वास छ कि बिग्रेको संज्ञानात्मक प्रकार्य र ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता उनीहरु "तंत्रिका आवाज" को धेरै उच्च स्तर को कारण हो - अर्थात् बढेको र अनियमित विद्युतीय धाराहरु जसले तंत्रिकाहरु लाई एक अर्कासंग कुराकानी गर्ने र कुरा गर्ने क्षमता लाई नष्ट गर्दछ।
यस अध्ययनमा 40० जना सहभागी थिए - जहाँ १ 18 बिरामीलाई 'फाइब्रोमाइल्जिया' पत्ता लागेको थियो र २२ बिरामी नियन्त्रण समूहमा थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले मस्तिष्कको विद्युतीय गतिविधि रेकर्ड गर्न इलेक्ट्रोएन्सेफ्लैग्राम (EEG) प्रयोग गरे जुन न्युरोफिजियोलोजिकल मापन हो। त्यसपछि तिनीहरूले स्नायुहरूको विद्युत प्रवाह मापन गरे र दुई अनुसन्धान समूहहरू तुलना गरे। उनीहरूले पत्ता लगाएका नतिजा चौंकाइने थिए र यसले अर्को शोध अध्ययनको रूपमा काम गर्दछ जुन फाइब्रोमाइल्जिया र अन्य पुरानो पीडा निदानको पछाडि शारीरिक कारकहरू छन् भनेर समर्थन गर्दछ।
नतिजाहरु फाइब्रोमाइल्जिया भएकाहरु बीच "तंत्रिका आवाज" को धेरै उच्च स्तर देखाइएको छ - अर्थात् अधिक विद्युत गतिविधि, गरीब तंत्रिका संचार र मस्तिष्क को विभिन्न भागहरु बीच समन्वय। निष्कर्ष "रेशेदार कोहरे" को रूप मा वर्णन गरीएको कारण को बारे मा अधिक भन्न को लागी सक्षम हुन को लागी एक आधार प्रदान गर्दछ।
अध्ययन नयाँ उपचार र आकलन विधिका लागि आधार प्रदान गर्न सक्छ। यस तरिकाले, धेरैले महत्त्वपूर्ण भारहरू बचत गर्न सक्दछन् किन कि तिनीहरू कुनै ठोस परिणाम बिना असीमित लामो अनुसन्धान जस्तो देखिन्छ। यो अन्ततः पुरानो पीडा निदान भएकाहरूको लागि केहि विशिष्ट निदान कारकहरू पाउन सक्दछ भने राम्रो हुदैन र?
यो पनि पढ्नुहोस्: - वात रोग विशेषज्ञहरूका लागि7व्यायाम
के योगले धुवाँ हटाउन सक्छ?
फाइब्रोमाइल्जियामा योगले पार्ने प्रभावलाई हेर्ने थुप्रै अनुसन्धान अध्ययनहरू गरिएको छ। अन्य चीजहरूमा:
२०१० (१) बाट गरिएको एक अध्ययन, जसमा brbr महिलाहरू फाइब्रोमाइल्जियाबाट प्रभावित थिए, त्यसले देखाए कि with हप्ताको कोर्स योगमा कम दुखाइ, थकान र सुधारिएको मुडको रूपमा सुधार भयो। पाठ्यक्रम कार्यक्रममा ध्यान, सास फेर्ने तरिकाहरू, कोमल योग आसन र यस पीडा डिसअर्डरसँग सम्बन्धित लक्षणहरूको सामना गर्न सिक्ने निर्देशन समावेश थियो।
२०१ from बाट अर्को मेटा-अध्ययन (धेरै अध्ययनहरूको स collection्ग्रह) निष्कर्षमा पुगे कि योगको प्रभावले निद्राको गुणस्तरमा सुधार ल्यायो, थकान र थकान कम भयो र यसले थोरै डिप्रेसन निम्त्यायो - जबकि अध्ययनमा संलग्नहरूले जीवनको सुधारिएको गुणवत्ताको रिपोर्ट गरे। तर अध्ययनले भने कि फाइब्रोमाइल्जिया लक्षणहरू बिरूद्ध योग प्रभावकारी थियो भनेर दृढतापूर्वक स्थापित गर्न अझै पर्याप्त राम्रो अनुसन्धान भएको छैन। अवस्थित अनुसन्धान आशाजनक देखिन्छ।
धेरै अध्ययनहरू पढिसकेपछि हाम्रो निष्कर्ष यो हो कि फाइब्रोमायाल्जिया र दीर्घकालीन पीडा निदानबाट राहत पाउन समग्र दृष्टिकोणमा योगले धेरैको लागि भूमिका निभाउन सक्छ। तर हामी यो पनि विश्वास गर्दछौं कि योग व्यक्तिमा अनुकूलित हुनुपर्दछ - सबैजनाले योगबाट धेरै बढी तान्ने र झुकावबाट लाभ उठाउँदैन, किनकि यसले उनीहरूको अवस्थामा भडकाउन सक्छ। कुञ्जी आफैलाई चिन्नु हो।
यो पनि पढ्नुहोस्: यो तपाइँ Fibromyalgia को बारे मा जान्नु पर्छ
अधिक जानकारी? यो समूहमा शामिल हुनुहोस्!
फेसबुक समूहमा सम्मिलित हुनुहोस् «संधिवात र दीर्घकालीन पीडा - नर्वे: अनुसन्धान र समाचारChronic (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) पछिल्ला अपडेटहरूको लागि अनुसन्धान र मिडिया लेखनको लागि पुरानो विकारहरूको बारेमा। यहाँ, सदस्यहरूले पनि मद्दत र समर्थन लिन सक्दछन् - दिनको सबै समयमा - आफ्नै अनुभव र सल्लाहको आदानप्रदानको माध्यमबाट।
भिडियो: रूमेटिस्टहरू र फिब्रोमायालियाद्वारा प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि व्यायाम
सदस्यता लिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् हाम्रो च्यानलमा - र दैनिक स्वास्थ्य सल्लाहहरू र व्यायाम कार्यक्रमहरूको लागि FB मा हाम्रो पृष्ठ अनुसरण गर्नुहोस्।
हामी वास्तवमै आशा गर्दछौं कि यो अनुसन्धानले फाइब्रोमाइल्जिया र दीर्घकालीन पीडा निदानको लागि भविष्यमा उपचारको लागि आधार बनाउन सक्छ।
फेरि, हामी चाहन्छौं यस लेखलाई सोशल मिडियामा वा तपाईंको ब्लग मार्फत साझेदारी गर्न राम्रोसँग सोध्नुहोस् (लेखमा सिधा लिंक गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्)। फाइब्रोमायाल्जिया भएकाहरूको लागि राम्रो दैनिक जीवनको लागि बुझ्ने र बढेको फोकस पहिलो चरण हो।
फाइब्रोमाइल्जिया एक लामो दुखाइ निदान हो जुन प्रभावित व्यक्तिलाई अत्यन्त विनाशकारी हुन सक्छ। निदानले कम ऊर्जा, दैनिक दुखाइ र दैनिक चुनौतिहरू निम्त्याउन सक्छ जुन कारी र ओला नॉर्डम्यानको भन्दा धेरै माथि छ। हामी तपाईंलाई फाइब्रोमायाल्जियाको उपचारमा बढि ध्यान केन्द्रित गर्न र थप अनुसन्धानका लागि यसलाई मनपराउन र साझेदारी गर्न आग्रह गर्दछौं। मन पराउने र साझेदारी गर्ने सबैलाई धेरै धन्यवाद - हुन सक्छ कि हामी एक साथ एक दिन उपचार फेला पार्न सँगै हुन सक्छौं?
विकल्प एक: एफबी मा सीधा साझा - वेबसाइट ठेगाना प्रतिलिपि र तपाइँको फेसबुक पेज मा वा एक प्रासंगिक फेसबुक समूह मा तपाइँ एक सदस्य हुनुहुन्छ पेस्ट गर्नुहोस्। वा तलको "शेयर" बटन थिच्नुहोस् तपाइँको फेसबुक मा पोस्ट पोस्ट साझा गर्न को लागी।
(साझेदारी गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक ठूलो सबैलाई धन्यवाद जसले फाइब्रोमायाल्जिया र लामो दुखाइ निदानको बृद्धि बढावा बुझ्न प्रोत्साहन गर्दछ।
विकल्प बी: तपाईंको ब्लगमा लेखमा सीधा लिंक गर्नुहोस्।
विकल्प C: अनुसरण गर्नुहोस् र बराबर हाम्रो फेसबुक पृष्ठ (यहाँ क्लिक गरीन्छ भने)
गोन्जालेज एट अल, २०१।। संज्ञानात्मक हस्तक्षेपको क्रममा फाइब्रोमाइल्जिया बिरामीहरूमा न्यूरल आवाज र बिग्रेको मस्तिष्क समक्रमण बढेको। वैज्ञानिक रिपोर्टहरू मात्रा 7, लेख संख्या: 5841 (2017
अर्को पृष्ठ: - कसरी तपाईं कसरी रक्त क्लट छ भनेर जान्ने
माथिको चित्रमा क्लिक गर्नुहोस् अर्को पृष्ठमा सार्न।
(हामी २ messages--24 घण्टा भित्र सबै सन्देशहरू र प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्दछौं। हामी तपाईंलाई एमआरआई प्रतिक्रिया र त्यस्तै किसिमको व्याख्या गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छौं।)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibrotåke-2.jpg?media=1648573622 449 700 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2018-07-22 13:40:542020-06-14 21:19:39अनुसन्धान: यो 'Fibro कुहिरो' को कारण हुन सक्छ।
माथिल्लो जांघमा दुखाइ: कारण, उपचार र रोकथाम फाइब्रोमायाल्जिया: फाइब्रोमायाल्जिया भएकाहरूको लागि सही डाईट र डाइट के हो?